Azo atao ve ny mividy bakalavaly tsara amin'ny tranokalan'ny PR?
Rehefa mamorona rohy ho an'ny tranokalanao ianao, dia mila mifantoka manokana amin'ireo loharano nofidianao ho an'ity tanjona ity. Ny habetsaky ny webmasters sy ny manam-pahaizana SEO dia milaza fa ny rindran-kirakira mahery vaika izay mamindra siramamy sarobidy dia avy amin'ny tranonkalan'ny PR, toa an'i Google, YouTube, Wikipedia na Facebook.
Hanomboka ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny fiheverana fa efa manana kaonty raharaham-barotra ao amin'ny Facebook ianao ary tranonkala iray na farafaharatsiny handefasana pejy ho an'ny orinasanao.
Noho izany, araka ny fampiharana, ny zavatra rehetra ilainao hamokarana traikefa goavana manerana ny tranonkalanao dia ny mamorona voto mamaritra tsara amin'ny fampiasana ny teny fikarohana sy ny fananganana backlinks dofollow avy amin'ny tranokalan'ny PR - indoor tennis court maintenance cost de.
Ireo tranonkala avo PR mba hahazoana ny rindran-damba tsara
Asa mahasorena ny hahazoana rindran-damina tsara avy amin'ny sehatra fahefana ambony indrindra raha vao haingana ny tranonkala. Na izany aza, tokony tsy hiala amin'ny fametrahana teknolojia fananganana rohy mahazatra ianao izay hanampy anao hahatratra ny TOP amin'ny milina fikarohana ao anatin'ny fotoana fohy.
High backlinks PR avy amin'ny YouTube
YouTube dia sehatry ny media malaza izay Google. Ny isa 10 isanjatony no isan'ireo loharanom-baovao an'io tranonkala io. Azonao atao ny mahazo ny rindranasa avo lenta avy amin'ity loharano ity, mampiakatra ny lahatsarinao ao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mamorona lahatsary amin'ny antsipirihany momba ny vokatrao na ny orinasa amin'ny ankapobeny ary ny mampakatra ity lahatsary ity ao amin'ny tranonkala. Aorian'io, mila manamboatra famaritana lahatsary iray ianao, anisan'izany ny URL misy anao.
TOP Backlinks avy amin'ny Wikipedia
Wiki dia iray amin'ny encyclopedia lehibe indrindra noforonina tamin'ny fanampian'ny mpirotsaka an-tsitrapo. Io loharano io dia miavaka amin'ny fahefany sy ny maha-zava-dehibe azy. Izany no mahatonga azy manana ny laharana ambony indrindra amin'ny Google amin'ny karazana fanontaniana maro isan-karazany Authority isa amin'ny Wikipedia dia 10 avy amin'ny 10 ihany koa. Loharanon-kevitra tonga lafatra ny fitomboan'ny fahamendrehana sy ny fahefan'ny sehatra rehetra raha toa ka misy iray vaovao na efa ela. Misy fomba maro ahafahana miverin-dàlana avo lenta avo lenta avy amin'io loharano sarobidy io. Na izany aza, raha ny mikasika ny fanamarinana an-tsoratra dia lasa sarotra kokoa ny zavatra. Alohan'ny hamoahana lahatsoratra, dia ny olona tena mijery sy mankasitraka izany. Izany no mahatonga ny rindran-kaonty hoesorina mandritra ny dingan'ny fanamarinana an-tsoratra.
Kanefa, misy teknika mahasoa izay hanampy anao hahazo fiarovana goavana avy amin'ny Wikipedia na eo aza ny fepetra:
Mamorona pejy vaovao amin'ny Wiki, raha tsy mamoaka na inona na inona. Ho an'ny vanim-potoana sasany dia ho eo am-pandrefana ity pejy ity.
Avy eo, tsindrio ny pejy Wiki amin'ny alalan'ny sasany amin'ireo fangatahana malaza ary hametraka ny rohin'ny tranonkalanao any. Tsy azo atao ny manamarina ny pejy rehetra, izany no mahatonga ireo mpilatsaka an-tsitrapo Wikipedia tsy miraharaha fotsiny ireo fangatahana informatika izay tsy malaza.
Ho hita eo amin'ny lisitry ny loharanon-kevitra ny rohinao.
Tsara ny manamarika fa ny rohy Wikipedia dia tsy rohy manaraka. Izany no antony mahatonga ny rohy avy amin'ity loharano ity tsy hitondra anao fifamoivoizana. Na izany aza, mba hampitomboana ny fahamendrehana sy ny fahefan'ny loharano ao amin'ny Internet, dia azo atao ny maka rohy mankany amin'ny tranokalan'ny PR toa an'i Wikipedia.